တရုတ်မြန်နှုန်းမြင့်တံခါး၊ overhead Section Garage Door၊ ဖန်ထည်လျှောတံခါးထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ
Hermetic လုံ Operating ဆေးရုံတံခါး - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Hermetic လုံ Operating ဆေးရုံတံခါး ထုတ်ကုန်များ)
အလိုအလျောက်လုံဆေးရုံစစ်ဆင်ရေးတံခါးဖွင့်ဆွဲယူ အဆိုပါဆေးဘက်ဆေးရုံအော်တိုတံခါးကိုယေဘုယျအားဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်တဲ့အခန်းဒါမှမဟုတ်ဆေးရုံအိပ်ရာ၏အတွင်းနှင့်ထွက်တွန်းဖို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအတွက်ပြန်လည်သက်သာလာခြင်းရပ်ကွက်တွင်တပ်ဆင်သောတံခါးကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးပညာအလိုအလျှောက်တံခါးကို inductive...
Aluminum Roller Shutter Spiral မြန်နှုန်းမြင့်လုံခြုံရေးတံခါး
အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်အတူ Hongfa လိမ်မြန်နှုန်းမြင့်တံခါး စက်မှုအသုံးပြုမှုအတွက်မြင့်မားသောမြန်နှုန်းမြင့်သောလိမ်တံခါးသည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာအရတညီတညွတ်တည်းအမြန်နှုန်းမြင့်သောတံခါးအသစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းခွင်appliedရိယာများနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာမြေအောက်ကားဂိုဒေါင်၊ စူပါမားကက်များ၊ ဟိုက်ပါ့ခ်ကိတ်များ၊...
စက်မှု overhead ပုဒ်မတံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် စက်မှုလုပ်ငန်း overhead sectional door (ဒေါင်လိုက်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ကားဂိုဒေါင်ကဏ္ in တံခါး) ကိုနေရာတော်တော်များများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လျင်မြန်သောတံခါးများမှအကျိုးရသော်လည်း၎င်း၏တည်ရှိမှုကိုသတိမထားမိဘဲ၊ Stacking...
တာဘိုင်လူမီနီယမ်အစာရှောင်ခြင်း Roller Shurtter တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် မင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဘာကြောင့်တာဘိုင်အမြန်နှုန်းတံခါးလိုတယ်။ လူမီနီယံမြန်နှုန်းမြင့်တံခါးသည် ၁ မီတာထက်ပိုသောတံခါးဖွင့် / ပိတ်နိုင်သည်၊ ပါဝါကိုခုခံတွန်းလှန်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။ သင်၏တံခါး၊...
PVC အမြန်နှုန်း တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် သင်၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်အခက်အခဲရှိသည့်အခါမြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားပါလေ။ PVC ထည်၊ အလူမီနီယမ်အလွိုင်း၊ PVC မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကိုထည်၊ အလူမီနီယမ်နှင့်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။...
တံခါးဆွဲယူဆေးရုံအလိုအလျောက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုံစစ်ဆင်ရေး အဆိုပါဆေးဘက်ဆေးရုံအော်တိုတံခါးကိုယေဘုယျအားဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်တဲ့အခန်းဒါမှမဟုတ်ဆေးရုံအိပ်ရာ၏အတွင်းနှင့်ထွက်တွန်းဖို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအတွက်ပြန်လည်သက်သာလာခြင်းရပ်ကွက်တွင်တပ်ဆင်သောတံခါးကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးပညာအလိုအလျှောက်တံခါးကို inductive...
Polycarbonate Transparent လုံခြုံရေးဒေါင်လိုက် Shutter တံခါး
Polycarbonate Transparent လုံခြုံရေးဒေါင်လိုက် Roll Up ကို Shutter တံခါး အဆိုပါလျှပ်စစ်ကြည်လင်ရှပ်တာတံခါးသံမဏိပြွန်ဖြတ်သန်းကြောင်း PVC တံခါးကိုအပိုင်းပိုင်းရာပေါင်းများစွာ၏ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာပွင့်လင်း, anti-theft, Anti-မိုးရွာရွာ, မြေမှုန့်နှင့် dustproof ၏အားသာချက်များရှိပါသည်။ crystal...
Supply နိုင်ခြင်း: 2000 Set/Sets per Month
လုံခြုံရေးတံခါးမွမ်းမံစက်မှုအပေါ်မှငှက်မြင်ကွင်းအပိုင်း အဆိုပါဈတံခါးကို pane ထဲကတစ်ဦးစီးရီးရေးစပ်ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုသည်, ပုဒ်တလျှောက်တွင်ဓာတ်လှေကားအဆင့်မြှင့် ndustrial ။ စတိုင်အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းရိုးရှင်းပြီးချောမွေ့လိုင်းဒီဇိုင်းနှင့်အတူကိုသာယာသောခံစားချက်ပေးသည်။...
တာဘိုင်လူမီနီယမ် Panel ကို Rapid ကြိတ်စက်လုံခြုံရေးတံခါး
တာဘိုင်လူမီနီယမ် Panel ကို Rapid ကြိတ်စက်လုံခြုံရေးတံခါး မြန်နှုန်းမြင့်လိမ်တံခါးကို၏အင်္ဂါရပ်ကဘာလဲ?...
လိမ်မြန်ကြိတ်စက် Shutter လုံခြုံရေးတံခါး
လိမ်လူမီနီယမ်အလွိုင်းအမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး မြန်နှုန်းမြင့်လိမ်တံခါးကို၏အင်္ဂါရပ်ကဘာလဲ? စံပစ္စည်းကိရိယာများအဘို့အပြတင်းပေါက်ကြည့်ရှုအတူ 1)...
Supply နိုင်ခြင်း: 500 per year
လူမီနီယမ်အလွိုင်းကားဂိုဒေါင်တံခါးကို parameter သည်ဖော်ပြချက်: တံခါးကိုဖွင့်လှစ်: W = 2860mm * H ကို = 2450mm faceplate: 2700mmH = 2450mm ပစ္စည်း: လူမီနီယမ်အလွိုင်း, 2.0mm အထူ panel က: က Surface ကိုတုပသစ်သားပုံနှိပ်ခြင်း, အကောင်းအဆိုး cons box ကို shaping, လက်ချောင်းကာကွယ်မှုဒီဇိုင်း, panel ကိုအထူ 40 မီလီမီတာ အရောင်:...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုံဆေးရုံစစ်ဆင်ရေးတံခါးဆွဲယူ အဆိုပါဆေးဘက်ဆေးရုံအော်တိုတံခါးကိုယေဘုယျအားဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်တဲ့အခန်းဒါမှမဟုတ်ဆေးရုံအိပ်ရာ၏အတွင်းနှင့်ထွက်တွန်းဖို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအတွက်ပြန်လည်သက်သာလာခြင်းရပ်ကွက်တွင်တပ်ဆင်သောတံခါးကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးပညာအလိုအလျှောက်တံခါးကို inductive ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး...
သံမဏိ Air ကိုနေရာမှာလည်းပြည်ထဲရေးဆေးရုံတံခါး
သံမဏိ Air ကိုနေရာမှာလည်းပြည်ထဲရေးဆေးရုံတံခါး အဆိုပါဆေးဘက်ဆေးရုံအော်တိုတံခါးကိုယေဘုယျအားဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်တဲ့အခန်းဒါမှမဟုတ်ဆေးရုံအိပ်ရာ၏အတွင်းနှင့်ထွက်တွန်းဖို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအတွက်ပြန်လည်သက်သာလာခြင်းရပ်ကွက်တွင်တပ်ဆင်သောတံခါးကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးပညာအလိုအလျှောက်တံခါးကို inductive...
အလိုအလျောက်လုံဆေးရုံစစ်ဆင်ရေးတံခါးဆွဲယူ အဆိုပါဆေးဘက်ဆေးရုံအော်တိုတံခါးကိုယေဘုယျအားဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်တဲ့အခန်းဒါမှမဟုတ်ဆေးရုံအိပ်ရာ၏အတွင်းနှင့်ထွက်တွန်းဖို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအတွက်ပြန်လည်သက်သာလာခြင်းရပ်ကွက်တွင်တပ်ဆင်သောတံခါးကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးပညာအလိုအလျှောက်တံခါးကို inductive ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး...
overhead အပိုင်းလုံခြုံရေးတံခါးရုပ်သိမ်း အဆိုပါဈတံခါးကို pane ထဲကတစ်ဦးစီးရီးရေးစပ်ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုသည်, ပုဒ်တလျှောက်တွင်ဓာတ်လှေကားအဆင့်မြှင့် ndustrial ။ စတိုင်အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းရိုးရှင်းပြီးချောမွေ့လိုင်းဒီဇိုင်းနှင့်အတူကိုသာယာသောခံစားချက်ပေးသည်။...
လူမီနီယမ်အလွိုင်းပြည်ထဲရေးလုံခြုံရေးတံခါးမွမ်းမံ အဆိုပါဈတံခါးကို pane ထဲကတစ်ဦးစီးရီးရေးစပ်ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုသည်, ပုဒ်တလျှောက်တွင်ဓာတ်လှေကားအဆင့်မြှင့် ndustrial ။ စတိုင်အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းရိုးရှင်းပြီးချောမွေ့လိုင်းဒီဇိုင်းနှင့်အတူကိုသာယာသောခံစားချက်ပေးသည်။...
အလိုအလျောက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးရုံတံခါးလျှော ဆေးရုံတံခါးများ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတံခါးကိုလျှောစီတံခါးကိုအရည်အသွေးမြင့်သံမဏိကဝိုင်းလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကိုအတွင်းစိတ်ဘောင်နှင့်မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိကိုပျားလပို့ပြားနှင့်အတူစီတန်းတစ်ခုတည်းတပြင်လုံးကိုသံမဏိပန်းကန်, စုံလင်သောကုသမှုမွငျ့မားရှုထောင်တိကျမှန်ကန်မှုကိုပိတျထားရှိပါတယ်,...
Automatic အတွင်းဆေးရုံတံခါး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတံခါးကိုလျှောစီတံခါးကိုအရည်အသွေးမြင့်သံမဏိကဝိုင်းလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကိုအတွင်းစိတ်ဘောင်နှင့်မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိကိုပျားလပို့ပြားနှင့်အတူစီတန်းတစ်ခုတည်းတပြင်လုံးကိုသံမဏိပန်းကန်, စုံလင်သောကုသမှုမွငျ့မားရှုထောင်တိကျမှန်ကန်မှုကိုပိတျထားရှိပါတယ်, မှအရည်အသွေးမြင့် EPDM...
လူမီနီယမ်အလွိုင်းစက်မှုလုံခြုံရေးတံခါးမွမ်းမံ အဆိုပါဈတံခါးကို pane ထဲကတစ်ဦးစီးရီးရေးစပ်ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုသည်, ပုဒ်တလျှောက်တွင်ဓာတ်လှေကားအဆင့်မြှင့် ndustrial ။ စတိုင်အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းရိုးရှင်းပြီးချောမွေ့လိုင်းဒီဇိုင်းနှင့်အတူကိုသာယာသောခံစားချက်ပေးသည်။...
Hermetic လုံ Operating ဆေးရုံတံခါး Hermetic လုံ Operating တံခါး Hermetic လုံ Shield Operating တံခါး PVC အထည် Fast စက်ရုံတံခါး Rapid Action ဆေးရုံတံခါး Geomagetic တာဘိုင်အမြန်တံခါး ကလေးဆေးရုံလျှောတံခါး Spiral လူမီနီယမ်တံခါး